Imalli Hiriyootakoo sii fi hiriyootni kee hidhata walii walii keessanii fi Waaqayyo wajjin qabdan akka sirriitti jabaatee dhaabbatu sin gargaarti.
Imalli kun hundee bu’uuraa armaan gadii ijaara:
Hiriyoota keef kunuunsa gochuu. Addunyaa hiriyaa kee keessatti maaltu ta’aa akka jiru sirriitti beekuu. Kunis gaaffii “Akkam jirta?” jedhurra darbee, deebii gaaffii “Dhugumaan ati akkam jirta?” jedhuu beekuus dabalata.
Jaalala agarsiisuu. Imala Hiriyootakoo keessatti, wal-leellisuuf hiriyaa saala faalla gammachiisuuf jaalala isa TV ykn mul’ii garaa garaa keessatti arginu jechuu keenya miti. Jaalala jechuun, wanta baay’ee barbaachisaa ta’ee ofirra, hiriyaa keenyaaf caalchisuu jechuudha. Haala ulfaatu keessattillee, waan isaan gammachiisu gochuufii jechuudha.
Kadhannaa. Kadhannaan karaa ittiin Waaqayyo wajjjin wal qunnamnudha. Rakkoon keenya baay’een ofii keenyaaf furuudhaaf baay’ee ulfaataadha. Jijjiirama itti fufaa arguuf, Waaqayyoo isa ilaalcha, yookiin haala jijjiiru ilaaluu qabna.
Yoo Waaqayyo siif barbaachisaa ta’e, gochaaleen arfan ati gochuu qabdu kunooti. Wanti kun haaraa sitti ta’uu danda’a. Ta’us, homaa miti. Kuni imaladha, imala kana keessatti, gochaalee kanaan ni jabaatta.
Waaqayyo baay’ee sirraa fagoo yoo sitti fakkaate, yookiin immoo jireenya kee keessatti waa hojjechuu hin danda’u jettee yaadde, dhimma kana dhiisuu dandeessa. Tarii hiriyoota kee keessaa tokko Waan Waaqayyo jireenya isaanii keessatti hojjete qoodaa (himaa) jiru ta’a. Dhaggeeffadhu. Gaaffilee gaafadhu. Hiriyoota kee akka ta’an yaadadhu. Waanta isaan jedhan hundumaa itti walii galuun dirqamakee miti.
Wanta Waaqayyo jireenya kee keessatti hojjechaa jiru qoodi. Xiyyeeffadhu. Seenaa jireenya kee keessaa kan jireenya hiriyootni kee dabarsan wajjin wal fakkaata jettee yaaddu, haala ifa ta’een akka gargar baafachuu danda’anitti qoodiif. Waanta sitti dhaga’amu wajjin walqabsiistee yeroo dubbattu hiriyoonni kee si hordofuu danda’u.
Hiriyootni kee Waaqayyoon haa amaleeffatan. Yeroo isaan waa barbaadan, akka kadhachuufii dandeessu gaafadhu. Yeroo kadhattu ija kee banadhuutii kadhadhu. Jechoota beekamoo namni hundi hubachuu danda’u fayyadami. Maqaa ‘Yesuusiin’ kadhadhu. Yoo haalli mijate, hiriyaan kees si duukaa haa kadhatu. Kadhannaa sana booda, waan Waaqayyo hojjete isaanitti dhaga’ame deebiisaa gaafadhu.
Hiriyaa kee Waaqayyo wajjin walqunnamsiisi. Waaqayyo akka baay’ee fagoo hin taanee fi amma isa wajjjin walqunnamanitti isaan eegaa jiraachuusaa akka hubatan gargaari. Akkamitti akka ati duuka buutuu Yesuus taate itti himuu ni dandeessa. Akkamitti akka hiriyaa Waaqayyoo ta’uu dandeesse yoo beekuu barbaadan, Qabxiilee kana yoookiin fakkii kana kaasi.
Gad Dhiisi. Hiriyaan kee akkamitti michuu Waaqayyoo akka ta’e/taate, hiriyoota isaaniitti akka himan jajjabeessi.
Hiriyootni kee lama yookiin lamaa ol ta’uun waliin ta’uun seenaa Waaqayyoo baruu yoo barbaadan:
Garee hundeessi. Hiriyootni kee walitti dhufanii dhaabbataadhaan waa’ee Waaqayyoo haasa’uu barbaadu yoo ta’e gaafadhu. Torbee tokkoon, torbee lamaan, yookiin ta’ii adda addaa irratti wal ga’uu dandeessu. Qabxiilee IjaanWalarguu: Dhimma Jireenyaa jedhu kunniin si gargaaru jennee yaadna.
Wanta Bu’uuraa argadhu. Garee namoota sadii hanga torbaa warra walii wajjjin waa’ee Waaqayyoo baruu fedhan erga hundeessitanii, Imala Tokkoffaa: Wanta Bu’uuraa hordofuu dandeessu.
Ayyaanefadhu.. Murteewwan jireenya keenya keessatti barbaachisan namoota nuuf murteessoo ta’an wajjin ayyaneffatamuu yookiin kabajamuu qabu. Murteen Yesuus duukaa bu’uu Cuphaadhaan ayyaaneffatama. Haala Qohii Sirna Cuuphaa kan maatii, hiriyootaa fi hawaasa keessa jirtu irratti affeeruu dandeessu, akka itti qindeessuun danda’amu yaadonni kun si gargaaru.
Hawaasummaan Jiraadhu: Amantiin hiriyoota wajjiniin yeroo Imalaa hirmaachaa turtan jireenyatti jijjiiruudha. Imala Tokkoffaa erga xumurtee, Qabxiileen yeroo kutaa Macaafa Qulqulluu dubbistu si gargaaran kunooti.
Saantimni akka yaadachiistuu duraa duuba Imala kanaa ta’uun gargaartu kunooti.
Waa’ee Imala Hiriyootakoo odeeffannoo dabalataa yoo barbaadde, Marsariitii keenya daawwadhu.